မွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ
မွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ
- BMTM Mdy
Posted by BMTM Mdy on May 24, 2013 in Copy/Paste, Creative Writing | 23 comments
ဒီနေ့ မေလ ၂၄ ရက်နေ့ သောကြာနေ့ ကကျမ ရဲ့မွေးနေ့ပါ။မွေးနေ့ မွေးရက်မွေးလ လည်းတိုက်ပါတယ်.။
မနက်စောစောက မိုးအေးအေးလေးနဲ့ အရမ်းကွေးလို့ကောင်းတယ်..အိပ်ရာကနေ အတင်းထရတယ်….။
မနက် အစောဆုံးက ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီက ဖုန်းလာပါတယ်.။သူငယ်ချင်းလေး Happy Birthday တဲ့.။Thank You ခုလို အစေားဆုံးသတိရ ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးလို့။ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် မနှစ်ကမွေးနေ့ တုန်းကသူနဲ့ စခင်တာပါ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အထီးကျန် ၀မ်းနည်းမူတွေကို မျှဝေခံစားပေးပြီး အားပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါလို့..။
ခဏနေ တော့ မေမေ ဆီကဖုန်းဝင်လာတယ် မေမေဒီနေ့ သမီး အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာဆွမ်းပို့ပေးတယ် သာဓုခေါ် နော် ဘုရားသွားပြီး ကုသိုလ် လည်း လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့ တဲ့..။ကျေးဇူးပါမေမေလို သမီး ကိုဟိုး ကလေးဘ၀ကနေ ခုထိနှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွေးမွေး ပညာ တွေသင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။ နောက်ပြီး သမီး ကာယကံ ၀စီကံမနောကံ နဲ့ ပစ်မှားမိတာရှိ ရင်ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်..ဆိုတော့မေမေ က ခွှင့်လွှတ်ပါတယ်..မေမေသမီးလေး စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေတဲ့ ..။ ဖေဖေဖုန်းကိုခေါ်တော့ ဖုန်းမကိုင်ဘူး။
ဘုးရားသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း မဆက်သွယ်တာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဆီ ကဖုန်းလာတယ်..သြော်သူ ငါ့ မွေးနေ့ မှတ်မိသားပဲ လို့ထင်ပေမဲ့..သူကဒီတိုင်း သူဆီကိုလာလည် ပါဦးလို့..ပဲပြောတယ် သူမေ့သွားခဲ့ တယ်ထင်ပါတယ်..။
ဘုရားသွားတော့ ဒီနေ့အားလုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ အပြင် အခါကြီး ရက်ကြီး ဆိုတော့ လူတွေက ကျိတ်ကျိတ်တိုးပါဘဲ..ဖျော်ရည်ဒါန ပြုနေသူတွေလည်းများတယ်. ပတ်ပတ်လည်မှာ ရှိတဲ့ ပန်းခြံတွေ မှာလည်းလူတွေပြည့်လို့ ဘုရားပေါ်ကိုရောက်ဖို့ တော်တော် ကြာကြာ သွားလိုက်ရတယ်.ဘုရားပေါ်မှာလည်း.ညောင်ရေသွန်း ပွဲတော် ဆိုတော့ လူတွေ စည်ကားနေပါတယ်.။ဘုရားရောက်တော့ ခဏ ကောင်းမူလေးတွေလုပ်တယ်.. ဘုရားပေါ်မှာပန်းတွေ ကိုလှု ထားတယ်သပ္ပာယ် လိုက်တာ..တကယ်ကိုစိတ်ကူး ကောင်းတယ်။1876 ကလည်းဖုန်းခေါ်ပေးပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတယ်..ကျေးဇူးတင်တယ်လို့..။
ဘုရားပေါ် ကနေ့ဆင်းတော့ဖေဖေကဖုန်း ပြန်ခေါ်တယ်ဖေဖေ ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်.. ငါ့သမီးတွေ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေတဲ့.. ဘုရားကနေ လမ်းလျှောက်လာပြီး မမနဲ့ အတူ ထမင်းပေါင်းသွာစားခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ စာအုပ်နဲ့ ဘောပင်တစ်ချို့ ၀ယ်ပြီး ပရဟိတ ကျောင်းအတွက်လှု ပေးခဲ့တယ်..။
ဘာပဲပြောပြော.. ဒီနေ့ မွေးနေ့မှာ..ပျော်ရွှင်ပါစေ..ကျန်းမာပါစေ..ချမ်းသာပါစေ ..ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းပေးသံတွေကြားရတာ တကယ်ကြည်နှုး..ဖို့ ကောင်းပါတယ်.. အနေဝေးနေ.တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကမေ့ သွားခဲ့ပြီထင်တယ်..အလုပ်တူလုပ်တဲ့ သူတွေကတော့..မရင်းနှီးတော့.မသိကြသေးဘူး.. ဒါကြောင့် ရွာထဲက သူတွေ.. ကျမ ကို မွေး နေ့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးလို့……။ဆုတောင်း..ပေးသံလေးတွေ..ကြားချင်နေခဲ့ပါတယ်..။
( မွေးနေ့ အမှတ်တရရေးတာပါ)
About BMTM Mdy
Traditional Medicine has written7post in this Website..
အိမ်မက် သို့ ရည်မှန်းချက် အတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်....
View all posts by BMTM Mdy →
BMTM Mdy says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျိတ်ပြီးတောင်းတဲ့ဆုလည်း ရှိတာပေါ့
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နဲ့ တစ်ကွ လိုအပ်သာဆု၊ မြတ်သောဆုများ နဲ့ ပြည့်ပါစေ။
ဒါထက် သောကြာသမီး မို့ စကားတော့ များမယ် ထင်ရဲ့။
– Member တဦးသည် အခြားMemberအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)အခွင့်မရှိ….
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေရှင့် ကျေးဇူးပါ..
ွှThankalot!
Happy Birthday ………
ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် …….
(ဆုတောင်းစာသား သဂျီးမဖတ်ရ) ………
ကျေးဇူးပါစနေ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ချင်ပါတယ်
စိတ်၏ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့
ပြည့်စုံပြီး သကာလ ..
အဟမ်းးး ချစ်သောသူ (ကျီနုတ်) နှင့်လည်း
ဘွဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း ဆုံတွေ့နိုင်ဘာစေလို့ ….
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ မွေးရက်လေး ဖြစ်ပါစေ ခင်ဗျာ …..
အပေါ်က စနောက်တာကို ဗွေမယူပါနဲ့လို့ …
သမီး ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှာ ၊
ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒတွေ နှင့် ပြည့်စုံပါစေကွယ် ။
1876 ကလည်းဖုန်းခေါ်ပေးပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတယ် ဆိုတာ ၊
call center ကနေ တစ်ယောက်ယောက် ကတောင်းပေးထား (သို့) call center က service တစ်ခုခုယူထားလို့ အဲ့ဒီ့ ကနေ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ဘဖောရေ ။ ၁၈၇၆ ဆိုတာက call center ဖုန်းနံပါတ်တွေလေ .. ဟုတ်တယ်ဟုတ် ..
ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နူး စရာ မွေးနေ့မှသည် အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
ပရဟိတ အလှူတွက် သာဓုပါ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ သော မွေးနေ့ မှသည် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ရက်တိုင်းရက်တိုင်း ပျော်ရွှင် အောင်မြင်သော နေ့များပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေ တောင်ပေါ် အောင်ပန်းသူ ရေ။
ထာဝရ ချမ်းမြေ့ ပါစေကွယ်
YUYA MON says:
Happy Birthday ………ပါနော်
Happy Birthday..ပါ……တောင်းသောဆု…ကောင်းသောဆု နှင့် ပြည့်စုံပါစေ….
သို့ traditional medicine
တောင်းတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေလဲ ပြည့်စေ
တောင်းတဲ့ ဆုတောင်းတွေလဲ ပြည့်စေသဒီး